महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन? एक पल्ट अवस्य पढेर भ्रम हटाउनुहोस – Namaste Host
February 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन? एक पल्ट अवस्य पढेर भ्रम हटाउनुहोस
महिनावारी हुदा हिन्दु समाजमा मन्दिर प्रवेश नगर्नु भनेको छैन । पर बस्नु भनिन्छ ।यो महिनावारीमा दिएको छुट्टी हो। तिम्रो शरीर बाट रगत जादा तिमि कमजोर हुन्छौ भनेर आराम दिएको छुट्टी हो ।
तिमी महिनावारीमा अछुत वा अयोग्य हुदैनौ तिमी मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर बनाउने मान्छे जन्माउने पनि तिमी/नारी हौ ।तिमी जुनसुकै बेला मन्दिर जान सक्छौ । किन नजान भनियो फरक कोण बाट हेर्न सक्छौ । हिजो कुन अभ्यास थियो त्यसलाई जानेर बुझेर मात्र प्रश्न गर ।राम्रो लागेमा अवश्य शेयर गर्नुहोला ।